Yakanakisa Heat Stabilizer yePVC uye UPVC fittings dhayamita pombi yemvura inopa pombi PVC chubhu fekitori uye vagadziri | Aimsea
Kupisa Kunogadzikana kwePvc uye UPVC fittings yekudonha pombi yemvura inoendesa pombi PVC chubhu
Calcium Zinc kupisa Stabilizer ndiyo yakasarudzika mamiriro ePVC pombi uye fittings. Inogona kukwidziridzwa nekuwedzera kwezvakakosha zvinowedzerwa, kugadzira yakasimba asi kuburikidza nepombi zvinhu zvakadai seyakagadziridzwa PVC, ine mhepo ine multilayer mapaipi uye mapaipi ekudonha, uye kusagadzikana kwemamiriro ekunze, pamusoro pemapaipi epasi pevhu. Izvi zvinowedzerwa, pamwe nezvinodzora kupisa uye mafuta ekuwedzera kwepombi, zvinowedzerwa kune iyo PVC mbichana zvinhu mune yakasarudzika-inomhanya musanganisi kugadzira musanganiswa wakaomeswa unogadzirirwa pombi extrusion maitiro. CaZn Stabilizers inogadzirisa yakaderera ndiro ndiro dambudziko, rakanakisa kugadzirisa mashandiro uye yakanaka mutengo kuita.
Iyo ine yakasarudzika yekubatanidza mhedzisiro, iyo inopa iyo yekuzadza nezvakanaka disersibility, inovandudza pasuru ne resin, inovandudza chigadzirwa mashandiro, inoderedza michina kusakara, inoderedza jekiseni kumanikidza, uye inowedzera hupenyu hwebasa remidziyo, zvese kusimbisa nekusimudzira kunyunguduka, kwakanaka kuyerera kwepurasitiki;
Yakanaka kupisa kupisa
Yakadzika ndiro kunze
Calcium kabhoni 25 PHR
PVC dzakabuditswa pombi uye jekiseni zvikamu zvinoda zvigadzirwa zvine hunyanzvi hwekuita mashandiro, akanyanya kuomarara ehupfumi uye ecological zvinodiwa. Iyo PVC pombi system inosanganisira akasiyana saizi, maumbirwo uye mavara, uye akasarudzika ekuwedzera uye ekugadzira matekiniki anogona kuwana zvakanakisa zvigadzirwa. Inoshanda kune huwandu hwakawanda hwePVP pombi sisitimu: pombi dzemvura, pombi dzetsvina, mapaipi ekudiridzira, makondoni uye tambo dzematare. PVC yekuwedzera inogona kunyatso gadzira yemhando yepamusoro mapaipi uye fittings, uye ichipa chaiwo maitiro kune akapedza zvigadzirwa - Senge yakakwira michina kugadzikana uye hupenyu hwakareba.
Pombi dzePVC uye zvigadzirwa ndizvo zvigadzirwa zvepasirese nyika Kushandiswa kwavo kwepasirese kunokonzerwa nehunhu hwavo hunobatsira, kusanganisira kusimba uye kugadzikana, kugadzikana kwekumisikidza uye kugadzirisa, kurwisa ngura, kufamba kwakaderera, kwakanaka mechina zvivakwa, kugadzirisazve, kukwana kwakanyanya kusagadzikana, uye yakakwirira kemikari kuramba Simba uye yakanakisa mutengo.
Conditions Mamiriro ekuongorora
Zvishandiso: RM-200A rheometer ； Kupisa: 190 ± 1 ℃ ； Nguva: 6min
② Mhedzisiro yekuyedza
Kudzikamisa Kupurasitiki nguva / s Plasticizing torque / N · m Balance nguva / s Balance torque / N · m
Pashure: PVC Stabilizer yeIrrigation pombi yekupa mvura pombi PVC UPVC Plastic Pipe Drainage Pipe
Zvadaro: PVC Stabilizers yekasing & pombi dzemagetsi mugero wepasi pevhu wakaiswa pombi
Karusiyamu Zingi Stabilizer Kune PVC Pipe
Imwe Pack Inodzikamisa Pvc Pipe
Imwe Pakagadziriro Yekugadzirisa Mapombi Fittings
Pvc Heat Zvinogadzirisa Pombi Fittings
Stabilizer Ye PVC Zvikwepa
PVC Isina-Inotyisa Stabilizer, Pvc Heat Inodzikamisa, PVC Stabilizer, Pvc Imwe Pack Inodzikamisa, PVC Kupisa Kunodzikamisa Flexbile, PVC yokuvirisa,